Martech Zone - Teknolojiyada Suuqgeynta
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Ha iloobin Cookie-kii ugu dambeeyay Tani waa farriinta ugu badan ee farriinta cookie ee aan abid arko. Akhri ka dib markii aad ku raaxeysatey xoogaa digaag Thai ah Panda Express jimcihii.
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Toddobaadkan dhammaadkiisii, waxaan soo qaatay ganacsi / safar shaqsiyeed qaali ah illaa Victoria iyo Vancouver, British Columbia. Waxaan ka qalin jabiyay Dugsiga Sare ee Vancouver 20 sano ka hor waxaan kaliya laba jeer soo noqday. Waa magaalo la yaab leh - nadiif ah, qurux badan, casri ah oo caafimaad leh. Waqti ayaan la qaatay saaxiibkeyga ugu fiican dugsiga Sare waxaanan xitaa helnay 9 god oo golf ah. Waxay ahayd isbuuc dhammaad wanaagsan! (Ganacsiguna sifiican buu usocday, sidoo kale!) Waan ogaaday
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Waxaan doonayay inaan dabagal ku sameeyo qoraalkayga Furan = Kobaca in muddo ah. Lagu sharraxay boostadaas waa suurtagalnimada guul marka dadweynuhu xoogga saaraan sida xallintooda loogu dhexgeli karo xalalka kale. Waxaa jira dhinac u rogaya tan, taasna waa shirkadaha in ay ku xaddidaan shaqeynta xalalkooda xuddunta sida loo isticmaalo. Ku darista badeecooyin badan, adeegyo, iyo astaamo ayaa khatar noqon kara. Barnaamijyayaashu waxay ugu yeeraan
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Waxaa jiray dadyow waddanka oo dhan oo neefta ka qaaday markay arkeen daahfurka Shuttle si guul leh loo bilaabay. Waxaa jira kuwa rumaysan in balaayiin doolar oo lagu kharash gareeyay barnaamijka hawada sare ay tahay uun qashin aad u badan oo lacag ah. Waan kari waayey inbadan. Sida bilowgan ugu dambeeya, dejinta yoolal aan macquul aheyn in la gaaro ayaa ah waxa nagu kicinaya hal-abuurnimada iyo horumarka. Barnaamijka booska waa mid ka mid ah barnaamijyadaas
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Horraantii sannadkan, waxaan la shaqeeyay Kooxda Qaranka ee NFL si aan u qiimeeyo keydkooda xogta iyo iimaylka aaladaha suuqgeynta. Waxay ahayd qiimeyn dhammaystiran oo qalab kala duwan ah oo ay haysteen. Meelaha aan diiradda saaray waxay ahaayeen: Awood u lahaanshaha isdhexgalka xalalka ka baxsan Awoodda si otomaatig ah u socodsiinta howlaha Fududeynta adeegsiga Jawaab celinta shirkadda iyada oo loo marayo maareynta koontada iyo taageerada Labada ugu horreysa ee kuwani waxay ahaayeen faa'iidooyin mustaqbalka. Waxaan doonayay inaan hubiyo in ururka
V Hore 1 ... 1,025 1,026 1,027 Next →